Namuhla sikhuluma kanjani ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7. Ukuze wenze run uhlelo ngokushesha, udinga ukuvala izinqubo shu, defragment main drive yakho eqinile, ukuhlanza ebhukwini futhi kubuyiselwe ukuthula ekubuthweni izindawo amafayela esikhashana.
Ukuze uqale ukuxoxa ukuthi ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7 "esiphezulu" ngaphandle izicelo ezengeziwe. Abaningi izinhlelo efakwe ku-PC yakho, afakwe uqalisa futhi isebenze nge OS. Can kwandiswe umkhiqizo ngokuhlola uhlu idatha yohlelo lokusebenza futhi ususe naleyo kuyaqabukela asetshenziswa. Kuze kube yimanje, ukuya "Qala" imenyu, bese uthi "Control Panel", bese uvula esigabeni "System" ithebhu kanye "Isimiso Sokuqondisa". Lapha sidinga le "System yoMiso". Esikhathini "Ukuqalisa" ithebhu, ungathola izinhlelo ukuthi uqale nge-Windows. Susa ezingadingekile. Ukuze kulungiswe udaba kanjani ukwandisa ukusebenza laptop ukuze Windows 7, futhi kufanele ukuvala amasevisi ezingadingeki. Okokuqala, sakha ukubuyisela phuzu. Vula "Control Panel", bese uthi "System" ingxenye, bese ukhetha "Okwangasese." Lapha sisebenzisa "Dala" umsebenzi. Ukuze uhlu amasevisi evulekile "Qala" imenyu, bese uthi "Control Panel", bese ubona "System" ithebhu kanye "Isimiso Sokuqondisa". "Amasevisi" lapha sidinga. Ukuvala ezingadingekile. Ukungaqaliswa izinto ezilandelayo ngeke ukulimaza laptop: lezinto ezibekwe eqhulwini izinqubo, lokubhalisa akude, isiphequluli sekhompyutha, ezisebenza IP, okokufaka ithebhulethi. Ukuze egijima izinhlelo ukusebenza ngokushesha, ubacela for ezingeni eliphakeme igunya phezu kwazo zonke izinqubo zangokwasemuva. Ngakho, izicelo asebenzayo azotholakala ukuze inombolo enkulu Isikhathi se-CPU. Achazelwe ibhalansi oluhambisana ukubaluleka Win32PrioritySeparation. Ngaphezu kwalokho, ukwandisa ukusebenza Windows 7 laptop kuzovumela ukubeka imingcele ethize. Ukuyisa kubo ukuvula "Qala" imenyu, yiya engxenyeni ethi "Control Panel", kwase kuba kwabayishumi "System" sigaba. Lapha sidinga "Izilungiselelo ezithuthukisiwe". Ngaphansi ithebhu "imiphumela Visual" uma kunesidingo, ukuvimbela izithombe "Qala" imenyu, Aero Masinya futhi iwindi obala. Ingasetshenziselwa ukunikeza ukusebenza okuhamba phambili. Ngakho-ke kuzovimbela Aero visual effects. Lapha, umsebenzisi ngamunye kumelwe azenzele isinqumo asekelwe izidingo zabo, njengoba uhlelo sekuqala ngokushesha, kodwa uzonyamalala zonke ubuhle eze esibonakalayo.
Umbuzo kanjani ukwandisa ukusebenza laptop ukuze Windows 7, ungakhetha hhayi kuphela eyisisekelo ohlelweni amathuluzi, kodwa futhi izinhlelo ezikhethekile ukuthi manje ukukhuluma. Eyokuqala yalezi libizwa CCleaner - ke ahlanze ebhukwini uhlelo kanye hard drive. Ithuluzi Kulula ukusingatha. Ngaphezu kwalokho, njalo olusha. Interface has izinkinobho ezimbili: "Ukuhlanza" futhi "Ukuhlaziywa". Singagcina ngokubu- uhlole isimo disc, futhi ukuthola amathiphu nokwenza. Yize kunjalo, uma ucindezela "Sula", uhlelo lokusebenza kuzosusa wonke engadingekile. Lapho ukusebenza ebhukwini akufanele bayakhohlwa isipele. Isicelo yenza ngokuzenzakalelayo ukuba wenze kanjalo. Uhlelo lokusebenza futhi ikuvumela ukuba ulungiselele uqalisa. Uma ufuna ukuxazulula umbuzo kanjani ukwandisa ukusebenza laptop ukuze Windows 7, ukubuyekezwa umsebenzisi engakusiza uyalisebenzisa yini leli thuluzi. Ngemuva kwekuwahlolisisa sesiluqedile ukuthi iningi abanikazi kuthiwa umkhiqizo asikhetha. Izinzuzo main abizwa ngokuthi ukusebenza ngesivinini zohlelo, base mahhala ke, ukuntuleka ukukhangisa.
Uma uyazibuza kanjani ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7 emidlalweni, sebenzisa uhlelo lokusebenza. Yonke inqubo nokwenza kahle kudinga olulodwa ukuqhafaza igundane. Isicelo evala izinqubo ezahlukene ingemuva, esusa RAM, ithuthukisa ukusebenza Computing chip. Uhlelo kwasakazwa mahhala kwandisa ijubane uxhumano kunethiwekhi, ukufaka abashayeli zakamuva, likwazi interface enembile, defragment amafayela akho umdlalo, okwandisa disk ukusebenza, ukuxilonga irherho yakha imibiko.
Uma ubhekana umbuzo kanjani ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7, leli thuluzi ingakusiza. Futhi lolu hlelo kungayilungisa ifayela uhlelo amaphutha. Zonke ngokweqile kungaba zisuswe nje igundane izinkinobho ezimbalwa. Ngaphezu kwalokho, ikhono defragment hard drive, nokwenza kanye nokusebenza ebhukwini. Module ngokuthi System Advisor sizohlaziya isimo samanje ohlelweni, bese izokhipha umhlahlandlela ogcwele ukuthuthukisa notebook ukusebenza. amathuluzi engeziwe kufakwe iqoqo izicelo (phezu 15) kuzosiza ukugcina uhlelo zisesimweni ephelele. Kungenzeka ukuba nokwandisa inethiwekhi yakho. Kwasetshenziswa uhlelo zezikhumbuzo mayelana nokwenza.
Ngo ekuxazululeni impikiswano kanjani ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7 amageyimu, leli thuluzi nalo luyoba usizo. Ithuluzi Liyindawo elula futhi kulula ukuyisebenzisa. Isicelo ingafinyelela nokwanda okuphawulekayo lozimele. Yonke imithombo laptop lapho siqondiswa ukuba ihluzo processing. Imisa izinqubo ezingadingekile kanye nezinsizakalo. Isicelo kuyazenzakela. Ukuze umsebenzi kuyadingeka ukuze ungeze umdlalo database ngokucacisa ikheli ifayela yayo esiphezulu bese ucindezela inkinobho isiqalo. Uhlelo lokusebenza nakanjani free. Iyatholakala ngemuva isicelo. Kukhona interface nice.
Just okukodwa igundane ngosuku ukuxazulula zonke izinkinga. Uma ngaphambi kukhona umbuzo: kanjani ukwandisa ukusebenza notebook yakho Windows 7, - Uhlelo Advanced Uhlelo ngeke ngempela ukuxazulula le nkinga. Kuyinto unesibopho iqhakambisa Ukuvikelwa, ukuvuselelwa kanye wokuhlanza izinhlelo. Isicelo likwazi a version mahhala. Ithuluzi kunikeza umuzwa "laptop amasha." Kwasetshenziswa enamandla disk defragmentation. A ileveli entsha nokwenza kanye ebhukwini yokuhlanza. Kukhona isivikelo isofthiwe enonya. Idiski lokuhlanza amandla ezahlukene kanye nesivinini. Waqaphela azungeze 50 izinhlobo okungenamsoco amafayela. Ubuningi embule amakhono esakhelwe kohlelo, okuyinto ivumela ukusebenza kwayo. Ijubane lale ukwanda okungenani u-40%. Kulungisa internet. Ithuluzi Kulula ukusebenzisa.
Lokhu ikhithi has a lot of amathuluzi nokwandisa futhi wenze ngendlela ofisa ngayo imisebenzi ephathekayo. Isicelo ungasusa amafayela ezingadingekile, silungise amaphutha, ukuhlanza ebhukwini lakho, ukuphatha uqalisa, nokwandisa inkumbulo. Ungasusa amafayela eziphindaphindiwe nokwenza ngezifiso isiphequluli. okufushane Russian zohlelo etholakalayo.
Ilungiselela i-Windows 7 - umsebenzi oyinhloko lolu hlelo. I interface ilula. Kulokhu, umsebenzisi uthola amathuluzi ukuze kusheshiswe uhlelo wakho, izilungiselelo, ukuphathwa uhlelo, ukuhlanza hard drive futhi uhlelo lokubhalisa. Ithuluzi uyakwati kubona ezihlukahlukene izinqubo eziyinqaba egijima ohlelweni. Uhlelo lokusebenza free.
WinUtilities - kuyinto iqoqo amathuluzi ukuthuthukisa ukusebenza futhi ulungiselele OS. Ungakwazi uhlanze disk kusukela emafayeleni okungena ahlukahlukene okungenamsoco, uhlele izilungiselelo ahlukahlukene ohlelweni, yakha ibhekhaphu ebhukwini, uphathe izinqubo, susa izinqamuleli ephukile okubili amafayela, nokwandisa inkumbulo umsebenzi, ukuphatha uqalisa, ukubuyisela amafayela, defragment drive yakho, susa umlando izingosi ze-Internet.
Siphinde wakhuluma isicelo TweakNow RegCleaner, okuyinto ahlanze futhi lithuthukise uhlelo lwakho lokubhalisa, nokugcina okusezingeni eliphezulu ohlelweni ukusebenza. Special kahle search algorithm, lokusebenza olakhelwe masinya ukuthola idatha udoti, kulondolozwa ukukhunjulwa kwabo kuphele. Isicelo kudala isipele kohlelo ngaphambi kokuqala kwalolo vivinyo. Speed Liyindawo okusezingeni eliphezulu. Lolu hlelo lusebenza ngokunembile kakhulu.
Ekuxazululeni le nkinga futhi kufanele sinake SystemTweaker isicelo ukuthi ikwazile ukusebenza okungcono ngokulungisa izilungiselelo ahlukahlukene Windows. Umsebenzisi ungaphatha imingcele amahlanu ahlukene. ukusheshisa Make OS ukulayisha. Ungakwazi ulungiselele izilungiselelo zenethiwekhi, ukuthuthukisa ukuvikeleka. Iyatholakala ukusebenza kwimenyu yokuqukethwe ye umqhubi.
Muva nje, isicelo zazo kuzoxoxwa ngakho kohlaka impahla, ngokuthi Defraggler ephathekayo. Ithuluzi bekulokhu defragmentation. Ngemva umsebenzi wakhe laptop kakhulu ngokushesha.
Indlela yokwenza amabhisikidi kusukela izaqheqhe (iresiphi) esiphundu? "Izindlebe" ushizi